Iindaba-Iziphumo zentsholongwane ye-covid-19 kwi-NBR latex
Ukuvavanywa komlilo kuKratshi
Uvavanyo loMlilo Cupel
Chlorine dioksayidi yeCwecwe
Chlorine dioksayidi enye yecandelo lePowder
Chlorine dioksayidi ezimbini zeekhithi
I-Chlorine Dioxide Sachet 20G (eyongezelelweyo)
I-Chlorine Dioxide Sachets 20G (Ukukhululwa ngokukhawuleza)
Chlorine dioxide Gel Powder
I-Chlorine Dioxide Air Sanitizer
Iziphumo zentsholongwane ye-covid-19 kwi-NBR latex
I-latex yeNBR ibonisa iipropathi ezigqwesileyo ezinje ngokuchasene neoyile kunye nezinye iikhemikhali ezenza ukuba zinqweneleke kakhulu ekuveliseni izixhobo ezikhuselayo ikakhulu iigloves zecandelo lezamashishini kunye nonyango. Oku kungena kukhulayo kulindeleke ukuba kudale amathuba amaninzi kwimakethi ye-nitrile butadiene yerabha ye-latex ngalo lonke ixesha lokuqikelela.
Ukukhula kokungena kwamashishini kwimimandla esaphuhlayo kudityaniswa nokwanda kokukhula kwezabasebenzi kuya kuba negalelo elihle ekukhuleni kweemarike ngeli xesha lokuphonononga. Ngapha koko, ukusetyenziswa okongeziweyo kweiglavu kwimichiza, ephepheni nakumashishini okutya kunokwenzeka ukuba kwandise isabelo sentengiso se-latex yerabha ye-latex ngalo lonke ixesha eliqikelelweyo.
Intsholongwane ebanzi ye-COVID-19 kwihlabathi lonke ikhokelele ekunyukeni kwenkcitho yezempilo eya kuthi inyuse imfuno yeiglavu zelatex zexesha elizayo. I-COVID-19 ikhokelele ekusetyenzisweni kweigloves kukhuseleko lomntu kwaye ke kulindeleke ukuba izise ukonyuka kweemfuno zentengiso ye-latex yerabha ye-lateadi ngonyaka we-2020.
Imfuno ye-NBR ye-latex yamashishini kunye nabasebenzisi bokugqibela bokutya kulindeleke ukuba ihlale isezantsi ngexesha lokutshixwa kwasekuqaleni kwe-2020, nangona kunjalo, ishishini lokhathalelo lwempilo kulindeleke ukuba libonise ukufuna okuphezulu ngalo lonke ixesha kwangelo xesha linye.
Ukukhula kweAsia Pacific kuqikelelwa ukuba kukhula kweyona CAGR iphezulu ngexesha lokuqikelela. Ukwanda kwamandla okwandiswa ngabavelisi abaphambili kunye nenkcitho ekhulayo yezempilo kunokwenzeka ukuba iqhube i-nitrile butadiene irabha yeemarike zentengiso ngexesha elinikiweyo le-2020-2026. IMalaysia, iThailand, kunye ne China banegalelo elikhulu kuhlumo lwemarike. UMbindi Mpuma kunye neLatin America kulindeleke ukuba ibonise ukukhula okuthobekileyo ngalo lonke ixesha lokuqikelela. Inani eliqingqiweyo labenzi be-latex yeNBR kwingingqi kunye nokuxhomekeka okuphezulu kuthengiso lwempahla kweli lizwe kubangela ukukhula kancinci. Ishishini le-latex ye-Middle East kuqikelelwa ukuba lakhula kwi-CAGR engaphezulu kancinci kwe-3% ngexesha lovavanyo. (Isitsho kwi-Global Market Insights Inc.)
Ixesha leposi: Dec-03-2020
Inkampani yethu yasekwa ngo-2005 kwaye kwikomkhulu ibekwe e shijiazhuang leyo imbonakalo entle China. Owona shishino uphambili kubandakanya ukuveliswa kunye nokuthengiswa kwemichiza yezemigodi kunye neemveliso ezisetyenziswayo zokuvavanywa komlilo, kunye nokuthunyelwa ngaphandle kwetekhnoloji yeklorini dayokisa ……
Zhongyuan Building No.368 Youyi North Street Shijiazhuang China